I-Loft CENTRE NE ** Igaraji kunye nePenthouse CHILOUT SIMAHLA !! **
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguCarlos
Indawo yokuhlala eyi-65mt2 kwiziko elidala kunye nelokuzonwabisa, elisanda kulungiswa ngegaraji yabucala (isikwere esikhulu kakhulu) kunye neterrace yophahla ye-chilout YAMAHHALA. Inombhede oyi-150cmts kunye nenye i-135cmts eyohlukileyo yokusingqongileyo, ebonakalayo kunye ne-11 yeemitha zomgama. Igaraji iimitha ezingama-50 ukusuka kwindawo yokuhlala kunye nevidiyo yeeyure ezingama-24 kwaye akukho ndlela yokufikelela. I-25mts2 yophahla lwe-terrace kuphela yeendwendwe ezikumgangatho we-5 ngaphandle kokuphakanyiswa okulungiselelwe njengendawo yokupholisa, i-barbecue, i-hammocks kunye nemibono ekhethekileyo yedolophu endala.
I-loft yindawo evulekileyo eneendawo ezichazwe kakuhle, ikhululekile kakhulu, intle, ikhululekile, ikwinqanaba lesitrato (umgangatho wokuqala ngaphandle kwe-elevator) kunye neemitha ezingama-50 ukusuka ePz del Reloj. Inegumbi lokuhlambela elihle elineshawari yesileyiti ephangaleleyo nekhululekileyo enejethi yamanzi ephumlayo.
Inesiqithi esisecaleni kwekhitshi ukonwabela ukutya, ube ne-aperitif, njl njl ngelixa ujonge isitalato.
Inefenitshala enkulu yokubeka kakuhle iisutikheyisi nezihlangu.
Axhotyiswe ngokugqibeleleyo undlala, iitawuli, idraya yeenwele, ikofu, uMenzi lezonka, microwave, izinto zasekhitshini, placemats, ikofu, uMenzi kumatshini wokuhlamba impahla, clotheslines, intsimbi, ibhodi-ayina, moya Air kutshisa / kubanda Free WiFi 5g 300mb kunye Netflix kunye Smart TV 4k TV ........
Ngokuphathelele ixesha lokungena kunye nokuphuma, linokwahluka ngokwemfuno nangokwesicelo.
2 iibhedi ezilala abantu ababini, 1 iisofa eziyi-, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-2
45" HDTV ene-I-Chromecast, I-Netflix, I-Roku
Iyafumaneka kwiindwendwe, ukufowunela okanye uWhatsApp ukuze ujongane neemfuno zabo, okanye undwendwele imibuzo, indawo yokutyela, indawo yokonwabela, igalufa, ukukhwela isikhephe, indawo yokuphumla, ndiya kukuvuyela ukukunceda kuyo nayiphi na into oyifunayo, ukuze ukuhlala kwakho kube lula njenge kunokwenzeka.
Iyafumaneka kwiindwendwe, ukufowunela okanye uWhatsApp ukuze ujongane neemfuno zabo, okanye undwendwele imibuzo, indawo yokutyela, indawo yokonwabela, igalufa, ukukhwela isikhephe,…